Ra’iisul wasaare Rooble oo maanta xilka la wareegaya (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Rooble oo maanta xilka la wareegaya (AKHRISO)
Waxaa maanta lagu wadaa in ra’iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu si rasmi ah xilka ula wareego, iyadoona ay su’aal ka taagan tahay qofka xilka ku wareejin doonno.
War qoraal ah oo maalintii shalay loo kala diray xubnaha golihii wasiirada hore ayaa lagu sheegay inay kasoo qeyb galaan xaflad uu xilka kula wareegayo ra’iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble oo maanta ka dhici doonta xafiiska ra’iisul wasaraaha.
“Dhammaan xubnihii golihii hore ee wasiirada, waxa la idinku war-gelinayaa in maalinta berri oo Axad ah 27/09/2020, saacaduna tahay 10:00am, ay jirto xafladda uu xilka kula wareegayo ra’iisul wasaaraha cusub mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ka dhacaysa xafiiska RW..” Sidaasi waxaa lagu yiri fariinta qoraalka.
Ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta xilka kala wareegayo ra’iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, iyadoona qoraal uu ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre usoo qoray ra’iisul wasaaraha cusub uu u sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilka ku wareejiyo, si waafaqsan sharciga.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay inuu ra’iisul wasaare Rooble ku wareejin doonno wixii document iyo arrimo qaranka ku saabsan, iyadoona qoraalkaas uu ku ogeysiiyay madaxweynaha, guddoonka labada Aqal iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka.
Si kasta ha ahaate, siyaasiyiin iyo garyaqaano kala duwan ayaa ku tilmaamay arrin aan sharci aheyn islamarkaana aan waafaqsanayn dastuurka dalka, in ra’iisul wasaaraha cusub uu xilka kala wareego ra’iisul wasaare ku-xigeenkii hore Mahdi Maxamed Guuleed, balse ay tahay inuu xilka kala wareego ra’iisul wasaarihii hore oo ay BFS kalsoonidda kala noqdeen.